सुगाको मोह - E Net Nepal
Home Akabar-Birbal Story सुगाको मोह
एकदिन एउटा साधुले सुगा ल्याएर बादशाहलाई चढायो । त्यो सुगा असाध्यै राम्रो बोलि बोल्थ्यो । त्यसैले उनलाई मन पर्नसम्म पर्यो । र उनले त्यो सुगा किनेर आफ्नो एउटा नोकरलाई उक्त सुगाको पालनपोषणको जिम्मा दिए । पाल्ने जिम्मा लगाउदा उनले त्यस नोकरलाई भने "हेर ! यसलाई बडो हिफाजत संग पाल्नु यदि यसलाई केहि भयो भने अथवा यो सुगा मर्यो भन्ने समाचार कसैले मलाई सुनायो भने मा त्यसको टाउको काटीदिनेछु ।"
त्यस नोकरले त्यो सुगा लिएर गएर बडो सावधानीसित पालनपोषण गर्न थाल्यो । तर दुर्भाग्यबस केहि दिनपछि सुगा मर्यो । त्यसरी सुगा एकाएक मरेको देखेर त्यो बिचरा नोकर डरले थरथर काँप्न थाल्यो । अब के गर्ने यदि "सुगा मर्यो" भनेर बादशाहलाई खबर गरूँ भने च्वाट्टै काटिनुपर्नेछ । यदि "यत्रैसित्ति" भनि निच मारेर बसुँ भने पनि बच्ने हैन एक न एक दिन बादशाहले सुगा खोजिहल्छन । कत्ति गर्दा पनि यस काण्डबाट ज्यान बचाउने उपाय निस्केन र बिचरा त्यो नोकर लाचार भै बिरवल सामु पुग्यो । र बिन्तिभाऊ गर्दै ज्यान बचाई माग्ने बिचारले सम्पूर्ण बेलिबिस्तार लगायो । बिरवल ले पनि उसलाई भरसक म कोशिश गर्नेछु भनि आशा-भरोसा दिएर तुरुन्तै बादशाह कहाँ गए । उहाँ पुग्नेबित्तिकै के के न भए झैँ एकदमै आत्तिएर बिन्ति बिसाए "पृथ्वीनाथ ! सरकारको सु-सु-सुगा त .......।
बादशाहले पनि हडबडाउदै "के त्यो म-म-म-म-मर्यो कि क्या हो?" भन्दै प्रश्न गरे ।
तर बिरवलले "ह-ह-हैन सरकार! यस्तो कि-कि-किन हुन्थ्यो! त्यो त्यो त बडो तपस्वी बनेको छ त, आकाशतिर मुख फर्काएर, आँखा चिम्म चिम्लेर, सास टप्पै रोकेर निश्चल भई ध्यानमग्न भएको छ ।" भनि बिन्ति चढाए । बिरवल को त्यस्तो कुरा सुनी बादशाह रिसले चुर भै भन्न लागे "किन सफा भन्दैनौ कि सुगा मर्यो भनेर?"
"सरकार जो कुछ ठानिबक्सियोस मेरो बिचारमा त उसले समाधि कसे झैँ नै लाग्छ सरकारले आफै गएर हेरिबक्से बेस हुन्थ्यो" भनि बिरवलले बिन्ति बिसाए ।
त्यसपछि बादशाह र बिरवल दुवै जना सुगाको पिंजडा भएको ठाउँमा गए । उहाँ पुगेर बादशाहले बिरवल लाई भने "तिमि यस्तो चतुर व्यक्ति भएर पनि सुगा मरेको हो, कि हैन भन्ने जान्न सकेनौ? यदि तिमीले यो कुरो उही भनिदिएको भए यहाँ हस्यांग्फस्यांग गर्दै त आउनु पर्दैनथ्यो ।" तब प्रतिभाशाली चतुर बिरवलले भने "पृथ्वीनाथ ! यदि मैले उहीं साफसाफ भनिदिएको भए सरकारको प्रतिज्ञा मुताविक आफ्नो पनि ज्यानै गुमाउनु पर्थ्यो ।" अनि बादशाहलाई पनि आफ्नो आज्ञाको याद आयो । बिरवलको यो बुद्धिमानी समाचारले उनि अत्यन्तै हर्षित भए । र उनलाई बक्सिस पनि दिए । बिरवल ले पनि त्यो बक्सिस उसै सुगाको हेरचाह गर्ने नोकरलाई दिए ।